UDariyu Stavrovich: Biography, lokusungula, amaqiniso athakazelisayo
Esikhathini yesimanje Russian show bhizinisi ngakho abaculi kakhulu ukuhlala ethandwa iminyaka futhi njalo bayamangala futhi othakazelisayo izilaleli amakghonwabo. Lona ngumthetho we uhlobo ukuthi njalo avele bands ezintsha, nabahlabeleli, ngemva kwezinyanga eziyisithupha kuphela, 2-3 bhá hit kubo ngokulambisa ukukhumbula. Nokho, okwehlukile lo mthetho - uDariyu Stavrovich soloist eyaziwa iqembu "slot".
UDariyu wazalwa ngo Arkhangelsk esifundeni (emzini Velsk) February 1, 1986. Umndeni wayenguyise okugculisayo nokujabulisayo - udokotela, unina - uthisha. Ngemva kokuphothula secondary school starlet efika e Nizhny Novgorod Umculo College. Ngenxa ukuxhumana siqu uDariyu Stavrovich ithole eqenjini "slot", futhi kubhekwa abalandeli abaningi, kwaba vocals umbizela neqembu ithandwa kangaka okusezingeni eliphezulu nodumo. Ngokuphawulekayo, umsebenzi wakhe zomculo uDariyu kuhlanganiswe ngokuphumelelayo kufinyeleleka emfundvweni lephakeme. Ethola iziqu Institute of Contemporary Ubuciko, ukufundela Ekaterinoy Belobrovoy - one of the best othisha vocal lonke izwe lethu.
UDariyu Stavrovich hit kwakhiwa futhi ngempela iqembu yimpumelelo zomculo serendipitously. Igor Lobanov wayejwayelene Maksimom Samosvatom, owayengomunye owayehola umculi the rock band "umqedazwe." Kuyinto ngenxa leli qiniso, uDariyu wangeniswa iqembu "slot" ngo-2006. Leli qembu yasungulwa ngo 2002 futhi ngesikhathi ngokujoyina umculi lakhe elisha kakade kwadingeka eyodwa albhamu futhi umbhangqwana Ukugunda. izwi abahlukile nesitayela ukusebenza uDariyu ngokoqobo yaphefumulela ithimba lokudala impilo entsha. Kuyinto eqenjini, uyabuthola isidlaliso esisha - Nookie, livele umculi uzakwabo se-ID yakhe.
Phakathi "slot" isebenza uDariyu eqenjini wadedelwa 7 albhamu, kanye nenamba enkulu abangashadile. abalandeli babo inkanyezi wamshaya hhayi kuphela ukusebenza oluvelele lamaqembu wafutheka, kodwa futhi ukubukeka obizayo. "Slot" - kuyinto enye rock band, enza izingoma izinhlobo ezihlukahlukene zomculo. UDariyu Stavrovich ezama ukuzivumelanisa ngokugcwele isithombe futhi njalo livela amavidiyo futhi yomphakathi izingubo abayitoho, nge ezinweleni kanye nezinwele ezimnyama eside, ukubhoboza entsha futhi emzimbeni.
Ngaphezu abasebenza "slot" iqembu uDariyu ehilelekile ukuqopha iculo kusuka kwamanye abaculi. Isebenza mculi iphrojekthi uwedwa, engesiyo nzima ukuqagela, ngokuthi Nookie. Ngaphansi kwalo brand, namuhla ezikhishwe albhamu amabili nezingoma ezinye Ukugunda wathwebula. Akubona bonke abalandeli ukwazi ukuthi isibizo ukuthi wakhetha uDariyu Stavrovich - Nuqui. Ngokusho kwenye inguqulo, kuba incazelo emfushane nobuhlobo bobulili ngaphandle kokuzibophezela kumuntu, kodwa inkanyezi lithi igama layo ngo-Japanese kuphela.
Ngo ingxoxo yakhe uDariyu wathi asebenzayo umsebenzi solo neze wezwakalisa ukuba nokwahlukana okuseduze iqembu core. "Imbobo" namanje Nuki ezithakazelisayo, nethimba uzoqhubeka khona, babuka nokukhulula iculo amasha nama-albhamu. UDariyu - akuyona nje umculi kodwa futhi wengoma kanye co-umbhali umculo. uhlobo for wakhe Confessedly akhethiwe - kuphela ukuba baveze imizwa yabo ngokugcwele, futhi lokho kungukuphila kwenu nje akuyona ngaphandle lokusungula.
Amaqiniso ethakazelisayo umuntu
Stavrovich Dariya Sergeevna - intombazane akuyona ekukholelweni ezeni. Kwelinye Ukugunda (ingoma "Mirrors"), wadlala isisulu ukubulala ongaqondakali elafika ngo-1952 e Jacksonville. Ukwakheka "slot" amaphrojekthi Nookie futhi ezihlukahlukene futhi inkanuko. They namatha phezu themes uthando, ukuphila nokufa, ezombusazwe futhi baqonde izinto ezenzekayo izinkinga zobusha yesimanje.
Kodwa ku-inkanyezi yakhe siqu etshela ukungathandwa. Yiqiniso, yena, njengabo abanye osaziwayo, ngezikhathi ezithile udumo amanoveli eshaya, kodwa abazange zisho kakhulu uDariyu Stavrovich. Nuki ukuphila siqu uyimfihlakalo, futhi ngenxa yezizathu ngempela kuyaqondakala. Entwasahlobo ka-2014 umculi leqembu "slot" Kwakuwuhambo kuhlasela ngakwesokudla ngaphambi okuhleliwe umbhalo wesandla kweseshini. Lowo okonile wamshaya umculi angahlaba nilimaza entanyeni, ngemva kwalokho uDariyu wahlinzwa phezu kuqhoqhoqho nentamo izitsha. Nokho, ngemva kwamasonto ambalwa Nuka ukuthi ngokuphepha esibhedlela, futhi ehlobo iqembu "slot" is ngokwesiko eyayenziwa ngesikhathi yonke imikhosi emikhulu.
I "lombhalo": lokusungula, ukubunjwa, ama-albhamu
Lo mshini isiginci: idivayisi iphinde wesifunda izici
Indlela yokupheka i-sea bass kuhhavini. Izitsha okumnandi kakhulu
Lapho ukusebenzisa othi awube nohlobo lomuntu?